प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : परराष्ट्रविद्हरू को के भन्छन् ? Weekly Nepal
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण : परराष्ट्रविद्हरू को के भन्छन् ?
March 24th, 2017 | by Weekly Nepal
(एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चीनसंग दूरगामी अर्थ राख्ने खालका सम्झौताहरू गर्दै राष्ट्रहितका लागि त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका बेला २०७३ साउन १९ गते ओली सरकारलाई बाह्यशक्तिले जबर्जस्ती विस्थापन गराएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । तत्कालीन ओली सरकार चीनतर्फ ढल्किएको आरोपमा विस्थापित गराएर प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि कतिपयले यसलाई भारतीय पक्षको जितको रुपमा अथ्र्याए । प्रचण्ड सरकारले यो बीचमा चीनसंग ओली सरकारले राष्ट्रहितका पक्षमा गरेका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयनका लागि अघि नबढाएपछि प्रचण्ड सरकार चीनलाई चिढ्याउँदै भारतसंग लहसिएको आरोप निरन्तर झेलिरह्यो, विपक्षीहरूबाट । तर, यही बीचमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणमा छन्। यही मेसोमा हामीले कूटनीतिक क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरूसंग प्रचण्डको चीन भ्रमणले कूटनीतिक रुपमा कस्तो अर्थ राख्छ भनेर सोधेका थियौं । प्रस्तुत छ, उनीहरूको भनाइ: सम्पादक)
० प्रचण्डले हात मात्र मिलाउने अवसर पाउलान् – महेन्द्रबहादुर पाण्डे, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण गर्दैछन् । प्रचण्ड चीनको हेनान प्रान्तस्थित बोआओमा आयोजना हुने ‘एसियाको अवधारणामा स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी बन्दैछन् । यही छलफलमा सहभागी हुन जाँदा प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसंग भेट गर्ने कुरा बाहिर आएको छ । एउटा छिमेकी देशका कार्यकारीले अर्को छिमेकी मित्र देशका कार्यकारीलाई भेट्नु राम्रो कुरा हो । नेपालीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधार्न उपयोग गरेर सार्थक पार्नुपर्छ । तर, यो भ्रमण गम्भीरतापूर्वक नभएर झारा टार्ने किसिमले हुँदैछ भन्ने मेरो बुझाई छ । यसर्थ यो भ्रमणको म खासै महत्व रहने देख्दिनँ । कूटनीतिक हिसाबले प्रचण्डले गर्न लागेको चीन भ्रमणको अर्थ छैन ।
भ्रमणलाई अर्थपूर्ण बनाउन यसको तयारी राम्रोसंग हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले यसको तयारीमा ध्यान नै दिएको देखिएको छैन । कुनै पनि देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरूले भ्रमण गर्दा केही खास र विशेष एजेन्डाहरू तय गरिएका हुन्छन् । र, भ्रमणका क्रममा ती एजेन्डाहरूमा छलफल गरिन्छ । तर, चीनसंग छलफल गर्नै पर्ने प्रचण्ड सरकारको के एजेन्डा हो भन्ने नै कसैलाई थाहा छैन । एजेन्डा उठाउने कुरामा सरकार गम्भीर नदेखिएकाले सी जिनपिङलाई दर्शन गरेर आउनु बाहेक प्रचण्ड सरकारको अर्को उपलब्धि हुने म देख्दिनँ/ठान्दिन पनि ।
कूटनीतिमा भ्रमणमा गइसकेपछि होइन, जानुपूर्व नै एजेन्डाहरू तय हुन्छन् । के–के विषयमा छलफल गर्ने, कहाँ समझदारी गर्ने, कुन विषयमा के गर्ने भन्ने पहिल्यै तय हुन्छ । तर, प्रचण्ड सरकारले चीन भ्रमणमा निस्किने बेला हुँदासम्म केही योजना नै तय गरेको सार्वजनिक भएको छैन । यसर्थ यो भ्रमणबाट प्रचण्डलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिसंग हात मिलाउने सुअवसर मिले पनि देशले केही पाउने अवस्था देखा परेको छैन ।
० यी कुरालाई सरकारले अहिलेसम्म वास्ता गरेको छैन – प्रकाशचन्द्र लोहनी, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री
– नेपालको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दैछन् । एक देशका प्रधानमन्त्रीले अर्को देशको भ्रमण गर्नु राम्रो कुरा भएकाले प्रचण्डले गर्न लागेको यो भ्रमण सकारात्मक छ । तर, भ्रमण हुनु नै ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त भ्रमण फलदायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । मूलभूत रुपमा नेपालको राष्ट्रिय हितका एजेन्डाहरू पारवहन र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई प्रोटोकलहरूमा उहाँले सही गर्नु हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरालाई नेपालीहरूले अहिले प्रतिक्षाका साथ हेरिरहेका छन् ।
नेपाल र चीनबीचमा पारवहन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी सम्झौता हँुदैछ । यो राम्रो कुरा हो । तर, त्यसलाई कार्यरुप दिन विभिन्न प्रोटोकलमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यो अहिलेको प्राथमिक एजेन्डा हो । यो किन पनि प्राथमिक र महत्वपूर्ण एजेन्डा हो भने यसलाई अगाडि बढाइयो भने चीनको लगानी नेपालमा ओइरिने छ । तर, यो कुरालाई सरकारले अहिलेसम्म वास्ता गरेको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसमा के गर्छन् भनेर नेपाली जनताले हेर्न चाहेका छन् ।
० भ्रमण कर्मकाण्डी मात्र हुने देखिन्छ – सीपी गजुरेल, नेता, नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी)
– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दैछन् । प्रचण्ड चीनको हेनान प्रान्तस्थित बोआओमा आयोजना हुने ‘एसियाको अवधारणामा स्वतन्त्र व्यापार र विश्वव्यापीकरण’ विषयक छलफलमा सहभागी बन्दै र यही मौकामा चिनियाँ राष्ट्रपतिसंग पनि भेट्दैछन् । एक देशका राष्ट्रप्रमुखले अर्को देशको भ्रमण गर्नु कूटनीतिक रुपमा फाइदाजनक कुरा हो । त्यसैले यो सकारात्मक छ । तर, प्रचण्डको यो भ्रमण देशका लागि त्यतिधेरै फाइदापूर्ण हुने देखिंदैन । यो भ्रमण किन महत्वपूर्ण हुने देखिंदैन भने चीनले प्रचण्डलाई महत्व दिएर बोलाएकै छैन । महत्व दिएर नबोलाएकाले भ्रमण औपचारिक मात्रै हुने देखिन्छ । कूटनीतिक रुपले यो भ्रमणले त्यतिधेरै अर्थ राख्दैन ।
भ्रमणको निश्चित उद्देश्यका साथै निश्चित र विशेष एजेण्डा पनि हुन्छन् । निश्चित उद्देश्य र एजेण्डा राखेर गरिएका त्यस्ता दुई छिमेकी देशबीचका भ्रमणले दुई देशबीचका सम्बन्धलाई अझ माथि उठाउने र नेपालको हित प्रस्तुत गर्ने हुन्छ । तर, यहाँ त्यस्तो केही छनक देखिंदैन । प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकार के एजेन्डा उठाउने भन्नेमै अन्योलग्रस्त देखिन्छ । उसका एजेन्डा के–के हुन् भन्ने कुराकै अहिलेसम्म अत्तोपत्तो नभएकाले यो भ्रमण कर्मकाण्डीबाट माथि उठ्ने म देख्दिनँ ।